Inkukhu yePox Vaccine Live China Manufacturer
Iimveliso ezigqityiweyo ezicwangcisiweyo ze-Bioproducts,I-Titer ephezulu ye-Bioproducts,I-Chicken Pox Biological Products Products Potency
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso ezigqityiweyo ezicwangcisiweyo ze-Bioproducts,I-Titer ephezulu ye-Bioproducts,I-Chicken Pox Biological Products Products Potency
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Inkukhu yePox Vaccine Live
Inkukhu yePox Vaccine Live
 Inkukhu yePox Vaccine Live
Iimvumi kunye nezilondolozo
Iigonti ziqulethe enye okanye izigulana ezingaphezulu, ezisetyenziselwa ukukhulisa iimpendulo zomzimba. I-tetanus toxoid, umzekelo, ngokuqhelekileyo i-adsorbed on alum . Oku kubonisa i-antigen ngendlela efana nokuvelisa inxaxheba enkulu kune-tetanus inxoid elula. Abantu abaneempendulo ezingathandekiyo kwi-adsorbed tanus toxoid banga kunikwa isitofu esilula xa ixesha lifika le-booster. [ uxwebhu olufunekayo ]
Kwilungiselelo lomkhankaso we-Persian Gulf ka-1990, isitofu esipheleleyo se-cell partussis sisetyenziswe njengesigxina sokugonya kwe-anthrax. Oku kuvelisa iimpendulo ezikhuselekileyo zokuzikhusela komzimba kunokuba unike i-anthrax yokugonya kuphela, enokufumana inzuzo xa ukuchazwa kusenokwenzeka. [ uxwebhu olufunekayo ]
Related Products List: Iimveliso ezigqityiweyo ezicwangcisiweyo ze-Bioproducts , I-Titer ephezulu ye-Bioproducts , I-Chicken Pox Biological Products Products Potency , Iimveliso ezigqityiweyo eziphezulu zeTiter Bioproducts , Iimveliso zeMvelo zigqityiwe zeMveliso zeBioproducts , Iimveliso ezigqityiweyo zeBiopharmaceutical Long , Iimveliso zeBiological Proceded Bioproducts , Iimveliso ezigqityiweyo eziphezulu zeTiter Vaccination